DAAWO: Yaa noqonaya Gudoomiyaha G Banaadir oo kushaqeynaya Halkii lagu dilay Yariisow?
MUQDISHO(P_TIMES) – Madaxda dawladda Soomaaliya ayaa ka fakaraya cidda noqonaysa gudoomiyaha gobalka Banaadir ahna Duqa magaalada Muqdisho, oo uu dhawaan ka geeriyooday Eng Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariisow, oo ku dhintay weerar lagu qaaday xarunta gobalka Banaadir.
Wararku waxay sheegayaan in ay ilaa hadda codsiyadooda gudbiyeen shaqsiyaad gaaraya 10 qof oo ay ku jiraan siyaasiin saameyn badan ku dhex leh arrimaha beesha Mudulood ee inta badan qaadata guddoonka gobalka Banaadir.
Madaxweynaha Soomaaliya oo dhawaan la kulmay odayaasha dhaqanka ee beesha Mudulood ayaa soo qaaday arrimaha ku saabsan magacaabidan, iyadoo ay warar kala duwan ka soo baxayaan.
Musharaxiinta ilaa hadda la ogaaday waxaa kamid ah Abukaate Cumar Dhagay oo horey u soo noqday Gudoomiyaha guddiga Doorashooyinkii Dad-banaa, Salaad Cali Jeelle oo horey u soo noqday Wasiir kuxigeenka gaashaandhiga Soomaaliya, Maxamed Abukar Islow oo hadda ah wasiirka Amniga ee Soomaaliya, Jen, Xassan Cali Nuur (Shuute) oo hadda ah gudoomiyaha maxkamadda darajada 1aad ee ciidamada iyo xubno kala duwan oo dhammaantood saameyn leh.
Tartanka ugu adag ayaa dhexmaraya xubnaha qaarkood, waxaana horyaala caqabado waa weyn oo ay ka mid yihiin, sidda ay iskugu wanaagsan yihiin kooxda NABAD & NOLOL, sidaas oo kalena daacad ugu noqon lahaayeen madaxda dawladda Soomaaliya.
Caqabadaha waa weyn ee hortaagan waxaa kamid ah sida ay u maareynayan arrimaha ammaanka, tabashada beelahodoa ee kuwajahan maqaamka caasumada oo ah meelaha ugu badan ee halistu ka taagan tahay.